Faraday joogto ah: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato khidmadda korantada | Qalab bilaash ah
Isaac | 17/09/2021 09:00 | waxbarashada
Sida waqtiyadii kale waxaan ka faalloonnay su'aalaha kale ee aasaasiga ah ee xagga elektaroonigga iyo korontada, sida Sharciga Ohm, hirar Xeerarka Kirchoff, iyo xitaa kan noocyada wareegyada korontada ee aasaasiga ah, sidoo kale waxay noqon lahayd mid xiiso leh in la ogaado waxay tahay Faraday joogto ah, maadaama ay kaa caawin karto inaad wax yar ka ogaato culeyska.
Maqaalkan wax yar ayaad ka fahmi doontaa waa maxay nimco joogto ah, maxaa loo dalban karaa, sideese loo xisaabiyaa ...
1 Waa maxay joogtada Faraday?
1.1 Waa maxay bar?
1.2 Waa maxay kharashka korontada?
2 Codsiyada joogtada Faraday
3 Waa maxay electrolysis?
Waa maxay joogtada Faraday?
La Faraday joogto ah waa mid si joogto ah loogu isticmaalo dhinacyada fiisigiska iyo kiimikada. Waxaa lagu qeexaa inta ay le'eg tahay korontada halkii mole ee electrons. Magaceedu wuxuu ka yimid saynisyahankii Ingiriiska Michael Faraday. Joogtadan ayaa loo adeegsan karaa hababka korontada si loo xisaabiyo cufnaanta walxaha ku samaysma koronto.
Waxaa lagu matali karaa xarafka F, waxaana lagu qeexaa qarashka hoose ee molarka, oo awoodi kara xisaabiso sida:
Ahaan F qiimaha ka dhashay ee joogtada Farday, e korontada aasaasiga ah, iyo Na waa Avogadro joogto ah:
Na = 6.02214076 × 1023 bar-1
Marka loo eego SI -ga, joogitaankan Faraday waa mid sax ah, sida jaangooyooyinka kale, qiimihiisuna waa: 96485,3321233100184 C / mol. Sidaad arki karto, waxaa lagu muujiyaa cutubka C / mol, oo ah, coulombs per mole. Iyo si aad u fahanto waxay yihiin cutubyadaani, haddii aadan weli garan, waxaad sii wadi kartaa akhrinta labada qaybood ee soo socda ...
Waa maxay bar?
Un bar waa unug cabbira xaddiga maaddada. Gudaha SI ee cutubyada, waa mid ka mid ah 7da tirada aasaasiga ah. Maado kasta, ha ahaato curiye ama kiimiko, waxaa jira taxane unugyo aasaasi ah oo ka kooban. Hal bar ayaa u dhiganta 6,022 140 76 × 1023 hay'adaha hoose, oo ah qiimaha tirooyinka go'an ee joogtada Avogadro.
Hay'adahan aasaasiga ahi waxay noqon karaan atom, molecule, ion, electron, photons, ama nooc kasta oo walxaha walxaha ah. Tusaale ahaan, tan ayaad ku samayn kartaa xisaabi tirada atamka waxa ku jira garaam ka mid ah walax la siiyay.
In kimistariga, barku waa lama huraan, maadaama ay oggolaanayso xisaabinta badan in loo sameeyo halabuurka, falcelinta kiimikada, iwm. Tusaale ahaan, biyaha (H2O), waxaad leedahay falcelin 2 H2 + O2 H 2 H2O, taas oo ah, in labada moor ee hydrogen (H2) iyo hal mole of oxygen (O2) falcelin si aad u samaysato laba joodar oo biyo ah. Intaas waxaa sii dheer, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu muujiyo feejignaan (eeg jajab).
Waa maxay kharashka korontada?
Dhinaca kale, laga bilaabo korontada Waxaan mar hore ka hadalnay waqtiyo kale, waa hanti jir ahaaneed oo ka kooban qaar ka mid ah walxaha subatomic -ka oo ka dhex muuqda xoogag soo jiidasho leh oo iska celin kara iyaga oo ay ugu wacan tahay meelaha elektromagnetka. Isdhexgalka elektromagnetigga, ee u dhexeeya lacag -bixinta iyo aagga korantada, waa mid ka mid ah 4 is -dhexgalka aasaasiga ah ee fiisikiska, oo ay weheliso xoogga xoogga nukliyeerka, xoogga nukliyeerka daciifka ah, iyo xoogga cuf -is -jiidadka.
Si loo cabbiro lacagtan korontada, Coulomb (C) ama Coulomb, waxaana lagu qeexaa xaddiga lacagta lagu qaado hal ilbidhiqsi iyada oo koronto xooggeedu yahay hal ampere.
Codsiyada joogtada Faraday
Hadaad isweydiiso waxa codsi wax ku ool ah Waxaad yeelan kartaa joogtadan Faraday, runtu waxay tahay inaad haysato dhowr, tusaalooyinka qaarkood waa:
Electroplating / anodizing: hababka warshadaha biraha oo hal bir ah lagu daboolay mid kale oo elektrolysis ah. Tusaale ahaan, marka birta la galvanized la lakabka zinc si ay u siiyaan iska caabin weyn oo daxalka. Nidaamyadan, biraha la dahaadhay ayaa loo adeegsadaa sida anode iyo elektrolytku waa milix milmi kara walxaha anode.
Daahirinta birta: sidoo kale waxaa lagu dabaqi karaa qaacidooyinka loo isticmaalo turxaan -bixinta biraha sida naxaas, zinc, tiin, iwm. Sidoo kale iyada oo la raacayo hababka korantada.
Waxsoosaarka kiimikada: si loo soo saaro xeryahooda kiimikada tan joogtada ah ayaa sidoo kale caadi ahaan la isticmaalaa.
Falanqaynta kiimikada: by electrolysis ka kooban kiimikada ayaa sidoo kale lagu go'aamin karaa.
Soosaarka gaaska: gaasaska sida ogsijiin ama hydrogen oo biyaha laga helo elektrolysis ayaa sidoo kale u adeegsada xisaabtan si joogto ah.
Daawada iyo bilicsanaantaElectrolysis ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu kiciyo neerfayaasha qaarkood ama lagu daweeyo dhibaatooyinka qaarkood, marka lagu daro ka saarida timaha aan la rabin. La'aanta joogtada ah, qalab farabadan oo noocan ah lama horumarin kari lahaa.
Adeegyada daabacaadda: Daabacayaasha, hababka korantada ayaa sidoo kale loo isticmaalaa walxaha qaarkood.
Astaamaha korontada: qayb elektaroonig ah oo caan ah oo ka kooban filim khafiif ah oo oksaydhka aluminium iyo anode aluminium oo u dhexeeya electrodes. Elektrolytka waa isku dar ah boric acid, glycerin, iyo ammonium hydroxide. Oo kanu waa sida awoodahaas waaweyn loo gaadhay ...
Waa maxay electrolysis?
Oo maadaama joogtaynta Faraday ay aad isugu dhow yihiin korontoAynu aragno waxa ereygan kale yahay ee aad loogu isticmaalo warshadaha. Waad ku mahadsan tahay hawshan, walxaha dhisme ayaa lagu kala saari karaa koronto. Tan waxaa lagu sameeyaa sii -deynta elektaroonada anions anode (oxidation) iyo qabashada elektarooniinta cations cathode (dhimis).
Waxaa si lama filaan ah u helay William Nicholson, sanadkii 1800, isagoo baranaya hawlgalka baytariyada kiimikada. Sanadkii 1834, Michael Faraday soo saaray oo daabacay sharciyada korontada.
Tusaale ahaan, electrolysis of biyaha H2O, waxay u oggolaaneysaa inay abuurto oksijiin iyo hydrogen. Haddii toos toos ah loogu adeegsado electrodes, kaas oo ka sooci doona oksijiinta iyo hydrogen -ka, oo awood u leh inuu kala saaro labada gaas (ma geli karaan, maadaama ay soo saaraan fal -celin qarxa oo aad khatar u ah).
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » waxbarashada » Faraday joogto ah: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato khidmadda korontada
Awood koronto oo la hagaajin karo: maxay tahay, sidee u shaqaysaa, maxaa loogu talagalay